Usave Muranda Wehurema Hwako - Iva Wakazvimirira paMavhiri
Usave muranda kune wako akaremara. Iwe unogona zvakadaro une chikuru unhu yehupenyu kana iwe uchikwanisa kutsvaga zvishandiso zvinokushandira iwe sechishandiso chekunyaradza uye nerusununguko rwekufamba. Kunyangwe zvaunowana kubva mavhiripu kune vanofambisa, ivo vanokutendera iwe kurarama hupenyu zvizere.
Zvichienderana nechazvino chinzvimbo chehurema hwekurapa, chinhu chimwe chinowonekwa chekurapa chinotsigira mamirioni avanhu ndeye wiricheya simudza.
= Kunyangwe iwe uchida simba kana ruoko kusimudza, izvi zvinopa iyo yekuwedzera nyore uye nharembozha kuti uwane yako wiricheya mukati uye kunze kwemotokari yako. Izvo zvakachipa uye zvinogona kuvharwa neyako inishuwarenzi yekurapa mupi.
simba wiricheya Lifts
Manual wiricheya anosimudza anoda Kirasi 1 sunga uye anoshanda nekupeta bhuku mavhiripu. Chitubu chakatakurwa hunhu zvakajairika kune ese aya maisimusi ayo anobatsira kutsigira iyo wiricheya. Chisimudziso chega chega chine huremu hwehuremu hwakasarudzika saka ita shuwa kuti unosarudza imwe inopa rutsigiro rwauchazoda.
simba wiricheya malifts achasimudza nekuisa yako wiricheya mumotokari yako kana muvan. Magetsi anosimudza ane huremu hwehuremu zvine chekuita neanosimudzwa akasimudzwa pachitubu, uye ari nyore kushandisa kunyangwe iwo achidhura kupfuura emakwenzi echinyorwa.
Kune akasiyana marudzi ekusimudza ane ekunze uye mukati mekurodha vhezheni. Anosimudza ayo ari mukati akareruka kuchengeta uye akaumbana zvakakwana kuti akwane mukati memakamuri enhumbi. Kubata a wiricheya kusimudza hakusi kuzokudzosera kumashure mune zvemari uye unogona kuhaya kambani kana iwe ukafamba wakawanda wega, ichi chingave sarudzo chehungwaru.
wiricheya Ramp YeMotokari
Usagadzirire kune yakanyanya kudhura wiricheya simudza nekuti inogona kuputsa nyore uye inogona kusapa unhu zvishandiso. Kutenga yakanyatsogadzirwa mainjiniya wiricheya kusimudza kunogara kwenguva refu uye kazhinji vanovimbika. Chimwe chinhu chekufunga nezvacho ndechekuti kusimudza iri ngura here chiratidzo.
Bvunza nyanzvi yekumisikidza kuti uwane mazano wiricheya anosimudza. Ivo vanogona kuve vanoziva nezve izvo zviri nani kugutsa zvaunoda uye nemhando dzakasiyana dzekusimudza.
wiricheya Ramp ichawedzera zvakanyanya rusununguko rwako pamwe ne unhu yehupenyu. Masitepisi anoratidza njodzi yekuchengetedza uye anogona kukumesa musana wako. Uine ramp ichabatsira zvakanyanya. Unogona kutenga yakakura wiricheya ramp online uye zviri nyore kumisikidza. Mazhinji Ramp enderera kwenguva yakati rebei uye unogona kusvika kusvika mapfumbamwe tsoka.
wiricheya Ramp Yakagadzirirwa kuve Chiedza muhuremu
Paive nenguva iyo zvaisave nyore kuisa wheel chair ramp kumisikidzwa pamwe chete nezvinhu zvaive zvakaomarara uye zvairema. wiricheya Ramp nhasi zvakavakwa nezvinhu zvakaomarara zvine huremu, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuenda kana panodiwa.
Mukupedzisira, iwe unoziva kuti iwe unofanirwa kuwana iyo yekuwedzera kurerukirwa iyo Ramp uye wiricheya malifts anopa. Izvi zvinyoronyoro zviri nyore zvinokupa iwe yakawanda mukana wekufunda nezvazvo uye zvinokupa iwe zvimwe kufamba.
Iwe haufanire kunge uri muranda wehurema hwako mumba mako. Enda kubasa usvinure lift kana ramp izvo zvinokubatsira iwe kufamba-famba uye uwane zvakare iko kusununguka kwawakarasikirwa!